Soosaaraha Shiinaha iyo Dheecaanka Cawska | Ruiyi
Duub cawska waxay kaa caawineysaa inaad cawskaaga ka dhigto maseyrka deriskaaga maxaa yeelay waxay baabi'ineysaa waxyeelada ay geysanayaan xoolaha iyo xilliyada.
Xulashada koowaad ee gaari firaaqada banaanka, ku habboon, wax ku ool ah iyo hufan. Ilaalinta deegaanka.
Lagu jiiday barxad waajibaad culus oo isdulsaaraya shaashadda, dia.
Durbaanku wuxuu siiyaa culeys ku filan shaqada rogid ee ugu adag, halka dhamaadka wareegsanna uu maareeyo cowskaaga oo u oggolaanaya isteerinka fudud.
Dahaarka budada ayaa ah mid xoqan oo cimiladu u adkeysato.
Kaydinta fudud: markaad rogaatid cawskaaga, iska daadi oo ku laal iskeelka iswada leh ee garaashka, ama qolku wuxuu qaadanayaa meel yar.
Rullaluistemka madhan waa mid fudud oo si fudud loo qaadi karo.
Iska ilaali dhaawaca cawska: dhamaadka silsiladdu waxay gacan ka geysaneysaa in laga fogaado waxyeellada cawska inta lagu jiro wareegga, halka birta wax lagu xoqo ee ka sarreysa durbaanka ay ka ilaalineyso rullaluistemadka qashinka marka la rogrogayo.
Jillaab Universal: waxaa ku jira culeys culus oo culus oo caalami ah si aad si fudud ugu dhejiso rullaluistemadka fuulitaanka ama cagaf kasta
Duub cawska waxay ku habboon yihiin tirtirka burburka iyo gacan ka geysashada abuuritaanka koboc cusub oo cows caafimaad qaba.
Abuurka ka dib, rogiddu waxay caawisaa xawaareynta biqilka iyada oo la hubinayo in abuurka ay xiriir la yeeshaan carrada.
Isticmaal rooga cawska oo biyo ka buuxaan si uu uga caawiyo sood cusub inuu dhismo, ka saarida jeebabka hawada iyo hubinta xididada inay la xiriiraan carrada.
Haddii jiirka iyo cayayaanka ay waxyeeleeyeen cawskaaga, a rullaluistemadka cawska waxay ka caawisaa sidii loo hagaajin lahaa cawska si ay isugu mid noqdaan.
Markaad dayactireysid jardiinooyin iyo cawska, waad isticmaali kartaa kuweena rullaluistemadka sharciga, Xeerkayagu wuxuu gacan ka geysan karaa aasaasida kobcin cusub si kaamil ah, cawska caafimaadka qaba. Xulashada koowaad ee gaariga xilliga firaaqada ah, ku habboon, wax ku ool ah oo hufan. Ilaalinta deegaanka Kahor abuurka abuurka cawska, rooga cawska ayaa kaa caawin karaheer aan sinnayn. Abuurka ka dib, rogiddu waxay caawisaa xawaareynta biqilka iyada oo la hubinayo in abuurka ay xiriir la yeeshaan carrada. Isticmaal rooga cawska oo biyo ka buuxaan si uu uga caawiyo sood cusub inuu dhismo, ka saarida jeebabka hawada iyo hubinta xididada inay la xiriiraan carrada. Haddii jiirka iyo cayayaanka ay waxyeelleeyeen cawskaaga, rooga cawska ayaa ka caawiya sidii cawska loogu simi lahaa isku mid ahaansho.
Macaamiisha guud ahaan waxay soo sheegaan in saameynta isticmaalka ay wanaagsan tahay, hawlgal fudud, rakibid habboon iyo tayo sare leh
Hore: Gawaarida xilliga firaaqada